ပင်လယ်ကမ်းခြေမှာ အဖိုးတန်ရတနာများကို တွေ့ရှိခဲ့တဲ့ ဖြစ်ရပ်တစ်ချို့ - Shwe Khit Online TV
HomeAmazingပင်လယ်ကမ်းခြေမှာ အဖိုးတန်ရတနာများကို တွေ့ရှိခဲ့တဲ့ ဖြစ်ရပ်တစ်ချို့
ပင်လယ်ကမ်းခြေမှာ အဖိုးတန်ရတနာများကို တွေ့ရှိခဲ့တဲ့ ဖြစ်ရပ်တစ်ချို့
September 1, 2021 Yan Amazing 0
ပရိသတ်ကြီး ကို ဒီတစ်ခါမှာတော့ ပင်လယ် ကမ်းခြေမှာ အဖိုးတန် ရတနာတွေကို ရှာတွေ့ခဲ့တဲ့ ဖြစ်ရပ် တစ်ချို့ကို ပြောပြပေးသွားမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ပင်လယ် ကမ်းခြေမှာတန်ဖိုးကြီးတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို ရှာတွေ့ဖို့ဆိုတာ တစ်ကယ်တော့ ဖြစ်နိုင်ချေ တော်တော်လေး နည်းတာပါ ။ ဒါ့ကြောင့် ဘယ်လို ရတနာတွေကို ရှာတွေ့ခဲ့လဲဆိုတာကိုတော့ အောက်ကပုံလေးတွေ တစ်ပုံချင်းစီကို ကြည့်လိုက်ပါဦးနော် …. shwekhitonlinetv.com
၁ ။ ဝေလငါး အန်ဖတ်
( ၂၀၁၉ ) ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ တုန်းက ထိုင်းနိုင်ငံမှာ နေထိုင်တဲ့ ငါးဖမ်း သမား တစ်ယောက်ဟာ Koh Samui လို့ ခေါ်တဲ့ ကမ်းခြေတစ်ခုမှာ လမ်းလျှောက်နေရင်း ထူးဆန်းတာ တစ်ခုကို ရှာတွေ့ခဲ့ပါတော့တယ် ။ သူရှာတွေ့ခဲ့တဲ့ အရာကတော့ အစိုင်အခဲလို ဖြစ်နေတဲ့ ဝေလငါး အန်ဖတ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဝေလငါး အန်ဖတ်ကို ambergris လို့လည်း ခေါ်ကြပြီး ရေမွှေး ထုတ်လုပ်တဲ့ နေရာမှာ အသုံးပြုကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ နောက်ပြီး ဝေလငါး အန်ဖတ်ဟာ တော်တော်လေးကို ရှားပါးတာကြောင့် စျေးကွက်ထဲမှာ အလွန် အဖိုးတန်နေတာပါ ။ shwekhitonlinetv.com
ငါးဖမ်းသမားကြီး ကတော့ ထို ဝေလငါး အန်ဖတ်ကို ရှာမတွေ့ခဲ့တုန်းက အချိန်အထိ ငါးဖမ်းတဲ့ အလုပ်ကနေ တစ်နေ့လုံးနေမှ ( ၁၃ ) ဒေါ်လာ ပဲ ရခဲ့တာပါ ။ ဒါပေမယ့်လည်း ကံတရားက မျက်နှာသာပေးခဲ့တာကြောင့် ငါးဖမ်းသမားကြီး ဟာ သူရှာတွေ့ခဲ့တဲ့ ဝေလငါး အန်ဖတ်ကို ရောင်းချပြီး ဒေါ်လာ ( ၃၂၀၀၀၀ ) ကျော် ပိုင်ဆိုင်သွားပါတော့တယ် ။ ငါးဖမ်းသမားကြီးကတော့ သူ့ဘ၀ကို အကြီးအကျယ် ပြောင်းလဲပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ ဝေလငါး အန်ဖတ် တုံးလေးကို ကျေးဇူးတင်နေမိမှာ အသေအချာပါပဲ ။ shwekhitonlinetv.com
၂ ။ ရွှေအစိုင်အခဲ
နောက်ထပ်ပြောပြပေးမှာကတော့ ( ၂၀၁၂ ) ခုနှစ်တုန်းက ရွှေရှာဖွေသူ တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Vincent Thurkettle ဆိုသူဟာ ဝေးလ် ပင်လယ် အနားက Moelfre ကမ်းခြေရွာလေးမှာ ကြက်ဥ အရွယ်ရှိတဲ့ အရာ တစ်ခုကို ရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ် ။ ဒီလိုနဲ့ သူရှာတွေ့ခဲ့တဲ့ ပစ္စည်းလေးကို သေချာ စစ်ဆေးကြည့်တဲ့ အခါမှာတော့ ၂၃ ကာရက် ရွှေတုံး ဖြစ်နေတာကို တွေ့ခဲ့ပြီး အလေးချိန်ကတော့ ၃.၄ အောင်စ ( ၉၇ ဂရမ် )ရှိပါတယ်။ Vincent ရှာတွေ့ခဲ့တဲ့ ဒီရွှေတုံးလေးဟာ ဗြိတိန်နိုင်ငံမှာ ရှာတွေ့ခဲ့သမျှ ရွှေတုံးတွေထဲ အကြီးဆုံး ဖြစ်တယ်လို့ သတ်မှတ် ခံထားရပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
ဒီ ရွှေတုံး ကို စစ တွေ့ပြီးနောက် Vincent ဟာ ( ၂၀၁၆ ) ခုနှစ် အထိ ဘယ်သူ့ကိုမှ မပြောခဲ့ပဲ လျှို့ဝှက်ထားခဲ့တာပါ ။ ဒါပေမယ့် သူ ထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်ချိန်မှာတော့ ထို ကမ်းခြေလေးမှာ စိတ်ဝင်စားလို့ လာကြတဲ့ လူအများကြီးနဲ့ ပြည့်နှက်သွားခဲ့ပါတယ် ။ သမိုင်းမှတ်တမ်းတွေအရတော့ Vincent ရှာတွေ့ခဲ့တဲ့ ရွှေတုံးဟာ ၁၈၅၉ ခုနှစ်တုန်းက ဟာရီကိန်း မုန်တိုင်းမိပြီး နစ်မြုပ်သွားတဲ့ Royal Charter သင်္ဘောပေါ်က ပစ္စည်း ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ပညာရှင်တွေက မှတ်ချက် ပြုခဲ့ကြပါတယ် ။ ဒီရွှေတုံးလေးရဲ့ စျေးကွက်တင်ပြီး ရောင်းချခဲ့ရာမှာတော့ ဒေါ်လာ ( ၆၄၀၀၀ ) ကျော် တန်ကြေး ရခဲ့ပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
၃ ။ အမွှေးရှည် ဆင်ကြီးရဲ့ သွား
Chon Carlile လို့ ခေါ်တဲ့ အမျိုးသား တစ်ယောက်ကတော့ ကမ်းခြေတွေမှာ ဦးခေါင်းခွံတွေ ၊ ကျောက်တွေနဲ့ ငါးမန်းသွားတွေကို ရှာဖွေစုဆောင်းရတာ ဝါသနာ ပါသူ တစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ် ။ ( ၂၀၁၉ ) ခုနှစ် ဇွန်လတုန်းက Charlie ဟာ ကယ်ရိုလိုင်းနား ပြည်နယ် တောင်ပိုင်းက Myrtle ကမ်းခြေမှာ ထူးဆန်းတဲ့ သွားတစ်ချောင်းကို ကောက်ရခဲ့ပါတယ် ။ သူ ရှာတွေ့ခဲ့တဲ့ သွား ကို စစ်ဆေးကြည့်တဲ့ အခါမှာတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ( ၁၀၀၀၀ ) ကျော် သက်တမ်း ရှိတဲ့ အပြင် ငါးမန်းသွား ထက် စိတ်ဝင်စားဖို့ ပိုကောင်းတဲ့ ပုံစံရှိတာကိုပါ တွေ့ရှိပါတော့တယ် ။ shwekhitonlinetv.com
ဒါ့ကြောင့် ထပ်မံပြီး သေချာ လေ့လာ ကြည့်တဲ့ အခါမှာတော့ သမိုင်းမတင်မီ ခေတ်က ရှိခဲ့တဲ့ အမွှေးရှည်ဆင် (mastodon ) တစ်ကောင်ရဲ့ သွား ဖြစ်နေတာကို သိသွားပါတော့တယ် ။ တစ်ချိန်တုန်းက အမွှေးရှည်ဆင်ကြီးတွေဟာ အမေရိက သစ်တော မြောက်ပိုင်း နဲ့ အလယ် ပိုင်းတွေမှာ ရှင်သန်ခဲ့စားကြပြီး လူသားတွေ ရဲ့ အမဲလိုက်မှု အပြင် တစ်ခြားသော အခြေအနေတွေကြောင့် မျိုးတုန်း ပျောက်ကွယ် သွားခဲ့ကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ အမွှေးရှည် ဆင်တစ်ကောင်ရဲ့ အရွယ်အစားဟာ ( ၉ ) ပေ ကျော်ရှိပြီး အလေးချိန်ကတော့ ( ၈ ) တန် ရှိပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
၄ ။ ရွှေဒင်္ဂါးပြားများ
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ( ၃၀၀ ) ကျော်လောက်တုန်းက စပိန် ကုန်သင်္ဘောတွေဟာ ဖလော်ရီဒါ မှာရှိတဲ့ အတ္တလန်တိတ် ကမ်းရိုးတန်း အနားမှာ နစ်မြုပ်သွားခဲ့ကြပါတယ် ။ ဒီအထဲမှာမှ ( ၁၇၁၅ ) ခုနှစ်တုန်းက စပိန် သင်္ဘောတစ်စင်းဟာ နှစ်ပေါင်း များစွာ ရေထဲ နစ်မြုပ်နေခဲ့ပြီး ( ၂၀၁၅ ) ခုနှစ် မှာတော့ ရတနာ မုဆိုး ရေငုပ်သမား တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ William Bartlett ဟာ ထို သင်္ဘောပျက်ကြီးကို ရှာတွေ့ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ Willaim ဟာ ထို သင်္ဘောပျက်ထဲကို သတ္ထုရှာဖွေတဲ့စက်နဲ့ ရှာဖွေကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ ရှေးဟောင်း ရွှေဒင်္ဂါးပြား ( ၂ ) ပြားလောက်ကို စတင်ရှာတွေ့ခဲ့ပါတော့တယ် ။ shwekhitonlinetv.com
ထိုအချိန်မှာပဲ Willaim ဟာ ရွှေဒင်္ဂါးပြားတွေ ဆက်လက်ပြီး ရှာဖွေဖို့အတွက် သူအဖွဲ့နဲ့ တိုင်ပင်ပြီး ထပ်မံရှာဖို့ ဆုံးဖြတ်ချက် ချခဲ့ပါတယ် ။ ဒီလိုနဲ့ William တို့အဖွဲ့ဟာ သင်္ဘောကြီးရဲ့ ပတ်ချာလည် တစ်ဝိုက်ကို ဆက်လက် ရှာဖွေကြည့်ရာမှာတော့ ရွှေဒင်္ဂါးပြားပေါင်း ( ၃၆၀ ) ကျော်လောက်ကို ထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ် ။ William တို့ ရှာတွေ့ခဲ့တဲ့ ရွှေဒင်္ဂါးပြားတွေကို စျေးနှုန်း သတ်မှတ်ကြည့်ကြတဲ့ အခါမှာတော့ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ( ၄.၅ ) သန်းကျော် အထိ တန်ကြေးရှိခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
၅ ။ ရှေးဟောင်း မျက်နှာဖုံး
နောက်ဆုံး တစ်ခု အနေနဲ့ ပြောပြပေးချင်တာကတော့ ကမ်းခြေတစ်ခုမှာ မျောပါလာခဲ့တဲ့ ရှေးဟောင်း မျက်နှာဖုံး အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ( ၂၀၁၉ ) ခုနှစ်တုန်းက ဖလောရီဒါ ပြည်နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ မဲလ်ဘုန်း ကမ်းခြေမှာ ရှေးဟောင်း မျက်နှာဖုံးတစ်ခု မျောပါလာခဲ့ပါတယ် ။ သုတေသီ ပညာရှင်တွေဟာ ထို မျက်နှာဖုံးကို စစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ နှစ်ပေါင်း ( ၁၀၀၀၀ ) ကနေ ( ၁၂၀၀၀ ) ကြား သက်တမ်း ရှိတယ်လို့ ခန့်မှန်းခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မျက်နှာဖုံးရဲ့ လက်ရာပုံစံကို ကြည့်ပြီး ရှေးဟောင်း တောင် အမေရိက ယဉ်ကျေးမှုကနေ ဆင်းသက်လာတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ မှတ်ချက်ပေးခဲ့ကြပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
ထို ရှေးဟောင်း မျက်နှာဖုံးကို ကြေးနီနဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ အပြင် ဥက္ကာခဲတွေမှာ တွေ့ရတတ်တဲ့ ရွှေ ၊ ငွေ နဲ့ iridium သတ္ထုအစအန တွေလည်း ပါဝင်ပါသေးတယ် ။ ဒါ့အပြင် ပညာရှင် တစ်ချို့ကတော့ ထို မျက်နှာဖုံးဟာ ( ၁၇၁၅ ) ခုနှစ် တုန်းက နစ်မြုပ်သွားခဲ့ကြတဲ့ စပိန် သင်္ဘောတွေက သယ်ဆောင်လာတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ကောက်ချက်ချခဲ့ကြပါတယ် ။ ထို အချိန်တုန်းက နစ်မြုပ်ခဲ့တဲ့ စပိန် သင်္ဘောဟာ ကျူးဘား ကနေ ပြန်လည်ထွက်ခွာလာပြီး ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းမိသွားတာကြောင့် လမ်းခရီးမှာတင် သင်္ဘော ( ၁၁ ) စင်းလုံး နစ်မြုပ်သွားခဲ့ကြတာပါ ။ လက်ရှိမှာတော့ ထို ရှေးဟောင်း မျက်နှာဖုံးရဲ့ တန်ဖိုးကို ဒေါ်လာ ( ၄ ) ဘီလီယံ အထိ သတ်မှတ်ထားပါတယ်တဲ့ …. shwekhitonlinetv.com
အခုဖော်ပြပေးထားတာကတော့ ပင်လယ်ကမ်းခြေမှာ အဖိုးတန်ရတနာများကို တွေ့ရှိခဲ့တဲ့ ဖြစ်ရပ်တစ်ချို့ကို စုစည်းဖော်ပြပေးထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းတွေမှာလည်း အခုလိုမျိုး စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ အကြောင်းအရာလေးတွေကို ရှာဖွေတင်ဆက်ပေးမှာမို့လို့ Shwe Khit ကို စောင့်မျှော်ဖတ်ရှုပေးကြပါဦးနော် …. shwekhitonlinetv.com
ငါးအရိုးစူးရင် ချက်ချင်း သက်သာစေမယ့် နည်းလမ်းများ
လူသိ အရမ်းနည်းတဲ့ မြေဖြူခဲရဲ့ အသုံးဝင်ပုံများ